I-iWatermark + ye-iOS yongeza ukubonwa kweVidiyo yeVidiyo ezi-4K | Plum emangalisayo
UMHLA: 7 / 2 / 18
ISan Francisco, CA-iWatermark, yiNombolo 1 kwaye sisixhobo sokubukela kuphela esinokufumaneka kuwo onke amaqonga ama-4, i-iPhone / i-iPad, iWindows, i-Android kunye neMac. IWatermark + sesona sixhobo saziwayo kunye nesinamandla sokujonga izixhobo kuwo onke amaqonga.
I-Adobe yeHlabathi yokuYila yokuYila yeLizwe kunye noMbhali oBalaseleyo wokuthengisa.
Thepha apha ngolwazi okanye ukhuphele uhlobo lwasimahla.
I-Plum emangalisayo ye-CEO uJulian Miller uthe "Ukuba wabelana ngefoto okanye ividiyo oyithathileyo nge-imeyile, kuFacebook, ku-Instagram, kuTwitter, njl. Njl. Kulindeleke ukuba uye kwintsholongwane emva koko ubaleke ngaphandle kolawulo lwakho kwaye ngaphandle konxibelelwano njengomdali. ” Uye wema, emva koko wongeza, "Isisombululo esilula kukutyikitya iifoto / iividiyo zakho ngokwedijithali usebenzisa iWatermark + eneewotshi ezibonakalayo kunye / okanye ezingabonakaliyo emva koko ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda inonxibelelwano olubonakalayo kuwe naphina apho iifoto / iividiyo zeWatermark zingazula khona."
Thepha apha ngolwazi okanye ukhuphele uhlobo oluhlawulweyo.
Kuba le nguqulo ayikhululekanga ukuba uqinisekisiwe cinezela nceda uphendule ngeziqinisekisi kwaye siya kuphendula ngekhowudi yepromo ye-Apple.
UJulian Miller uqhubeke "Ngale nguqulo intsha iWatermark + inokujonga iividiyo ezingama-4K kunye nokungenisa imithombo yeendaba, iifoto kunye neevidiyo, kwiinkonzo zelifu ezinje nge-iCloud, iDropbox, iGoogleDrive, iBhokisi, iAdobe yokuDala kunye nezinye. IWatermark + iyaqhubeka ikukuphela kosetyenziso lwewatch olusebenzayo lwe-iOS. Ngeempawu ezininzi ezizayo kungekudala. ”
Ngokukhuselekileyo, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ngombhalo, Imizobo, Umbhalo kwi-Arc, QR khowudi, utyikityo, umda, iVector, Ukubuyisela ubungakanani kwakhona, izihluzi zeSiko, iMetadata kunye ne-Steganographic watermark. Nje ukuba kufakwe ifoto ezi zibonakalayo kunye / okanye ezingabonakaliyo iiwindows zibonisa ifoto okanye ividiyo yenziwa, yahlelwa kwaye yeyakho. Ezi zinto zizodwa zenza iWatermark + ibalulekile kwiingcali nakwabaqalayo.
Iintlobo ze watermark (ngentla) ezifumaneka kwiWatermark + azifumaneki kwenye isoftware.
Isakhono sokudibanisa ii-watermark ezibonakalayo kunye / okanye ezingabonakaliyo zikhethekileyo kwi-iWatermark +.
Sebenzisa iWatermark + ngaphakathi kwezinye iinkqubo njengefoto eyandisiweyo yokuhlela iitermark nayo ikhethekile.
Ukungenisa kuzo zonke iinkonzo zelifu njenge-Dropbox, iCloud, Ibhokisi, iGoogle Drayivu, i-OneDrive, i-Adobe Creative Cloud, njl.
Ukudibana nokulinganisa ngokupheleleyo ukubonwa kweebatch zeefoto zobukhulu obahlukileyo kunye nokuqhelaniswa. Yahlukile!
Sebenzisa i-ExIF, i-IPTC, i-GPS kunye nenye imethadatha njenge-Tag kwiWebhu yokujonga iNcwadi ukubonisa imethadatha kwifoto yenye into eyingqayizivele.
Ezinye iintlobo ze-watermark ziyabonakala kwaye ezinye azibonakali. Zombini zisebenza ngeenjongo ezahlukeneyo. I-watermark ebonakalayo kulapho uphakamisa uphawu lwakho okanye utyikityo lomfanekiso wakho. Iimpawu ezingabonakaliyo ziyabonakala ngokucacileyo kwaye ulwazi lufihlwe kwifayile okanye idatha yombala womfanekiso.
Iimpawu zakho zamanzi zesiko zigcinwa zifumaneka kwaye zinokusetyenziswa ngempompo kuyo nayiphi na ifoto okanye ividiyo. Olunye uphawu olwahlukileyo nolubalulekileyo.
Iimpawu zamanzi ezibonakalayoText- Nawuphi na umbhalo obandakanya imethadatha eneesetingi zokutshintsha ifonti, ubungakanani, umbala, ujikelezo, njl.
Umzobo weBitmap- Igrafu ihlala ilubala elubala .png njenge-logo, uphawu, uphawu lwelungelo lokushicilela, njl njl. Ukungenisa.
Umda-beka imida ekhethekileyo kwiifoto.
Vector Graphic- Sebenzisa ngaphezulu kwe-5000 eyakhelwe-ngaphakathi kwivektha (ii-SVG's) ukubonisa imizobo egqibeleleyo nakweyiphi na ubungakanani.
Phinda wenze ubungakanani kwakhona - - cofa ukongeza ubungakanani besiko njengewatch kwiphoto (s) nganye.
Icebo lokucoca ulwelo-- cofa ukongeza isihluzo sesiko njengewatch kuyo nayiphi na imifanekiso.
Utyikityo-Sayina, ungenise ngaphakathi okanye uskene utyikityo lwakho kwivenkilikisi ukutyikitya indalo yakho.Iimpawu zamanzi ezingabonakaliyoMetadata -Ukongeza ulwazi (njenge-imeyile yakho okanye i-url) kwinxalenye ye-IPTC okanye ye-XMP yefayile yefoto.
I-iWatermark sisixhobo esikhethekileyo sokujonga iifoto ze-watermark kunye nevidiyo. Ixabiso eliphantsi, elisebenza ngakumbi, elikhawulezayo nelilula kakhulu ukusebenzisa iFotoShop. I-iWatermark yenzelwe ngokukodwa ukubonwa kwemifanekiso ngumenzi weefoto. Kubaluleke kakhulu kuye nakubani na owenza imidiya yoluntu njenge-Facebook, Instagram, Twitter, njl.
* Ngenisa iifoto okanye iividiyo ezivela kwiCamera yeCamera, iCloud, iDropbox, iGoogleDrive, Ibhokisi kunye nezinye iinkonzo zelifu.
* Isakhono sokwenza, sokugcina kunye nokufaka iintlobo ezili-12 zeewark, ngaphezulu kwayo nayiphi na enye into esetyenziswayo. Iindidi ezili-11 ezipheleleyo ze-watermark = 9 ebonakalayo + 2 engabonakaliyo edweliswe apha ngezantsi.
Iindidi zeWatermark ezibonakalayo (9)
-Vector Watermark -sebenzisa eyakhelweyo kwii-watermark.
-I-Border Watermark -beka umda okhethekileyo kufoto.
Yenza ubungakanani kwakhona bew watermark-thepha ukongeza ubungakanani besiko njengewotshi kuso nasiphi na isithombe.
Iifilitha zesiko- cofa ukongeza isihluzo sesiko njengewatch kwiphoto.
I-Watganographic Watermark -yokufaka / ukufihla ulwazi olufana negama, i-imeyile kunye / okanye ikhonkco lewebhusayithi kulwazi lwefoto. * Isebenza ngokuzimeleyo okanye ngokudibeneyo neLightroom, Photoshop, Iifoto zeApple, iifoto zikaGoogle kunye nabanye abaququzeleli bezithombe
* NguWatermark + kuphela onayo i-watganarkic enamathela / ifake ulwazi olungabonakaliyo kwifoto. * Isikhokelo esikhulu kunye nenkxaso.
I-watermarking yedijithali yeyona ndlela yakutsha nje yokubukeka. Ngokufana nee-watermark ezibonakalayo ephepheni, ii-watermark zedijithali zinokuphinda zisetyenziswe ukubonisa umnini / umyili kunye nokuqinisekisa imidiya yedijithali njengemifanekiso, iaudio kunye nevidiyo.
Ukongeza i-iWatermark ibonisa ngobuqili, nokuba yeyiphi ifoto okanye ividiyo yakho, ukuba yeyakho.
Rhoqo, iWatermark enegama, i-imeyile okanye url ukuze indalo yakho ibe noqhagamshelo olusemthethweni olubonakalayo kuwe.
Ukukhuthaza nokukhusela inkampani, igama kunye newebhusayithi yakho ngokwenza iWatermarking zonke iifoto / iividiyo ozikhuphile.
Ngokulula, khusela kwaye ukhusele iifoto zakho ngeeWatermark ezibonakalayo nezingabonakaliyo ezibonisa ukuba zenziwe kwaye zezakho.
Inguqulelo 4.5 Inguqulelo
-Iividiyo zeWatermark ze-4K, i-1080, i-720 njl.
-Ukungenisa iifoto enye okanye ezininzi okanye iividiyo ezivela kwiinkonzo zefu ezinje nge-iCloud, iDropbox, iGoogle Drayivu, ibhokisi, njl.
-Ukusetyenziswa okungcono kwememori. Oku kubaluleke kakhulu njengoko iifowuni zokusebenza ziqala ukuba namandla kunezixhobo ze desktop. Ewe, siyasazi eso sandi siphambene kodwa kuyenzeka.
Le app ilungile ukuba isetyenziswe kunye ne-Apple iPhone / i-iPad, i-Canon Inc., i-Nikon Inc., i-Olimpiki Inc., i-Sony Inc., i-Samsung, i-SLR, iikhamera eziqhelekileyo.
Isoftware ePlum emangalisayo namhlanje ibhengeze inguqulelo 4.5 ye-iWatermark + ye-iOS. iWatermark + eyongeza iitermarking zevidiyo ezi-4K. I-iWatermark + kuphela kwesixhobo sokujonga ukubonwa esikhoyo kuwo onke amaqonga ama-4, i-iPhone / i-iPad, iWindows, iiWindows kunye neMac. I-iWatermark + yinto eyimfuneko yokujonga ii-watermarking kubafoto bezobugcisa kwezeshishini kunye nokuzisebenzisa. Batch okanye ulandelelwano ngokulandelelana. Ukudibana nokulinganisa ngokupheleleyo. Ugcino lwedatha yazo zonke iisampulu kunye neewatchark zomsebenzisi ezifumanekayo ngempompo. Iintlobo zeWatermark zibandakanya, Isicatshulwa, iGrafu, iVector, isicatshulwa kwi-Arc, ikhowudi ye-QR, ukutyikitywa komda, ukuphinda umlinganiso, isihluzo sokuziphatha, iMetadata kunye neSteganographic.
IWatermark + yasimahla ye-iPhone / i-iPad (yongeza encinci 'Yenziwe ngeWatermark +' kwiifoto) Khuphela ikhonkco
IWatermark + ihlawulelwe i-iPhone / i-iPad (inqaku elipheleleyo, akukho ntengiso, akukho kuthengwa ngaphakathi nohlelo) Khuphela ikhonkco
iWatermark + tutorials zeYouTube Uthotho oluluncedo lwezifundo ezimfutshane kakhulu / ukuqonda.
Ulwazi oluthe kratya kwiPlum emangalisayo + Manual
I-30 sec yevidiyo -
IWatermark + Icon Icon 1024 × 1024
I-Plum emangalisayo, i-LLC yinkampani eyimfihlo ebekelwe ukudala i-iOS, iWindows, i-Android kunye ne-Mac zokusebenza. I-Plum Amazing ngumboneleli wehlabathi kwizicelo zeselfowuni kunye nedesktop ukusukela ngo-1995. IPlum Amazing yenza kwaye ithengise isoftware ngeyayo, iwebhusayithi kaGoogle kunye neApple kodwa ikwenza nomsebenzi wophuhliso (wenkqubo) wezinye iinkampani kunye nabaxhasi ngakumbi kwindawo yokufota. Sinomdla wokudala iimveliso ezinkulu ezinjenge CopyPaste, iWatermark, Essential, iClock, TinyAlarm, TinyCal, PixelStick, MountWatcher, SpeechMaker, PhotoShrinkr nezinye. Ilungelo lokushicilela (C) 2018 Plum emangalisayo. Onke Amalungelo Agciniwe.